Nampametra-panontaniana, hoy izy, ireto manamboninahitra milaza ho zoky mpananatra ireo zandry kanefa nisy tamin'izy ireo no tompon'antoka tamin'ny fanapotehana sy fambolena krizy ny firenena raha tsy hiresaka afa tsy ny raharaha 2002, izay nahasaringotra ny jeneraly iray efa misotro ronono tamin’ny famonoana ireo mpianatra ho manamboninahitra tao amin'ny sekoly ambony ao Ampopoka Fianarantsoa. Hita taratra fa tetika hampisaraham-bazana ny foloalindahy no tian'izy ireo hahatongavana, raha ny fanehoan-keviny, hoy izy. Fampiasana ireo foloalindahy hatrany mantsy no nahazoana fahefana teto ka izay no tanjon'izy ireo, ka izay no haverin’ny minisitry ny fiarovana fa ao ambadika. Tsara ny mampahatsiahy, fa nialoha izao zava-drehetra izao, dia efa nisy ny fanambarana politika nataon’ny minisitry ny fiarovana momba ny tsy tokony hitsabatsabahan’ny vahiny amin’ny resaka fifidianana, indrindra ny resaka fahafahana na tsy fahafaha-mirotsaky ny kandida. Inona no tena tanjona ny amin’izany ? Hiaro ny fanjakana HVM hatramin’ny farany amin’ny amboletra hisakana kandida atahorana ve ?